Ekonomikon | Cosmos koobi karayn
April 12-kii, 2014
Posted in xoog . lacag . Karma . wax aan waxba tarayn . Ekonomikon
Ku qor comment
Waxaad ku riyoon of Freedom?
Maxaad u malaynaysaa ku saabsan?
Pasha in la dilo beerta
Iyadoo kuu kormeero
In a meelaha ku filan oo waaweyn, ku lug leh Heer sare ah ee xoriyadda of Conduct, waxaa jira inaydnaan jirrabaadda ah inay khiyaameeyaan Nature, iyo, Tuujiya soo baxay ugu wanaagsan ee la heli karo boos oo dhan, tuur “waxyaabaha hawlaha ay muhiim u gaar ah” in milkiilayaasha weyn a ka iman kara. Ka fogaanshada sidaas go'aanka hawlaha khasabka ah, kuwaas oo natiijada tallaabo toos ah.
Dheecaan dhibaatooyin u gaar ah si ay noolaha kale ee noolaha, jinsiyad ama quruun ogolaanaya sanco uu ku sii nadiif ah iyo xoolo, laakiin lid ku ah dadka kale. In Samo qaar ka mid ah, oo ay dhacdo. Just doortaan tartanka soo baxaya la iman kara weyn, oo waxay ku siin faro badan oo leh dhibaatooyin u gaar ah. Codsiga nidaamsan sababa dhabtii, Weeraryahanka had iyo jeer tagaa taqsiir la'aan, iyo dhibanayaasha aan waxba galabsan si buuxda u furto eedda dambi qof kale.
Isticmaalka nidaamka reincarnation oo awood u leh inay cusboonaysiiyaan in Caalamka kale ee ay maamulaan xadgudubka iyo baadi si ay u gudbiyaan in meerayaasha kale ama Caalamka, halka nadiif ah ee dhulkeeda ku haray. Sababo la this nolosha dhibaato-free suurtagal ah in tiro badan oo aan u baahan si ay u dhintaan. Sayidka yeesho nidaamka biyo mareenka Karma on tartanka kaamil ka yar, quruumaha, ilbaxnimada, oon ku noqday Caalamka yar perspicacious iyo meerayaasha bakhtiyeen.
Tirada dadka ee ku meerayaasha kala duwan, biirtay Karma u gaar ah si ay u jideeyey, in ay qaab-dhismeedka (taas oo iyana sidoo kale ay awoodaan si ay u gudbiyaan “wadnay lacag” laga heli karaa ilbaxnimada), ugu danbeyn noqday dilaaliinta iyo maleegay burburinta ama waayitaanka ugu yaraan ku wargeliyay of Ras ama meerayaasha.
kala iibsiga A la mid ah “dhoobo” arkay in qaabka guud ee Ahaado final of Karma. TK. suurtogal ma aha in kaliya la qaado oo tuur eedda dambiyada iyaga u gaar ah kaas oo wax kasta oo tartanka – codsan tabaha kala duwan. Waxa ugu yaab leh, in “wareegyada sare” ogolaanshaha this, sidaa darteed waxaa jirta sabab. In this shisheeye Karma fiusaska ugu horeyn ku “ka dhacay” qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo inta badan ay qabtaan xoogga badan layers kale. Sidaasaa dhisi karaan caqabadaha nidaamka wax bulshada inteeda kale. Kuwaasi oo ay ka dib in la beddelay la mid ah “Products biodegradation” sida vlastvuyushtie “soo bandhigaa”. wareegyada talada qabtaan dilka maalin kasta qayb ka mid ah u shaqeeyo sakhiray kasta, oon ku faa'iidana iyo, isagoo “ka hor oo dhan by heerka uu kala daatay”, Waxay ku nool yihiin tiro badan.
Waxaas oo dhan waa hal sabab oo kaliya: ballaarinta ku noolaha caafimaad leh iyo faa'iido ilaa xad “wax soo saarka ee nabaad-noolaha” Waa qoondeynta ah ee tamarta iyo macluumaadka, taas oo lagama maarmaan u ah nolosha iyo horumarka ee lakabyada sare. tusaale ahaan, tamarta nolosha iyo ikhtiraac cusub sayniska, taas oo soo diro Cosmos ee horumarinta ku haboon “tijaabooyinka noolaha”, laakiin taas oo aan diyaar u yihiin inay fikirka xaddidan ee wareegyada xukunka, taas oo ku dhisan awood, ugu horayn, noocyo kala duwan oo rabshad, labadaba si toos ah iyo si aan toos ahayn weli. Oo “midhaha Reebay” ma ay joogaan xishood “ka badan meydad iyo madaxdii socdaan”. Sayidka baabbi'innay qaybaha rajo, iyo okupiruya dhulkooda, “klutz universal” bartaan farsamooyinka cusub iyo siyaabo sii dheeraad ah ee nolosha, jidaynayey ilbaxnimada noocan oo kale ah si ay u leexdo xagga sare ah.
Sababtoo ah kala soocidda ee macluumaad waxtar leh gudbay Roob aamusiin. Haddii aan u soo bandhigaan “oo dhan awoodda shaqada” – dacawo qaar ka mid ah side yeedhi doonaa la'aanta: otgovarivaty, aaminsanahay insignificance ah, dareenka middaysan, hanjabo iwm. Haddii ay dhab ahaantii aaminsan yihiin, in waxaas oo dhan waa qiimo lahayn oo aan u baahnayn – maxaad ay markaas ku eekaan su'aalahan; ha u fiican ula dagaalamaan jiir dhulka hoostiisa wasakh ah (maxaa yeelay, waa u faa'iido badan ee ilaalinta cuntada), ama is dhiibaan si addoonsiga ashkhaas waxtar leh. waxaa laga yaabaa in, Haddii ay sidaa yeelaan waxay isu prozombiruyut caato ah is-khiyaano – cadayso tusaale ahaan, in ay tahay mid waxtar leh.
La macaamilka, hay'adaha kala duwan ee dowladda ay awoodi karaan inay ka dhaadhiciyaan observer ee aan joogtada ahayn in, in uu jiro wax muhiim ah oo cajiib ah. Haddii awood u leh inay ka fekeraan u shaqeeyo sida halkii daciif ah – Wuxu qabaa, in dhammaan, in uu soo rogay oo uu noqdo addoon “nidaamka”.
Lahaanshaha on gacanta tiro badan oo ah hay'adaha awoodda, Waxaad u ciyaari kartaa noocyo kala duwan oo xaaladaha: dhibaatada, badbaadada, duulaankii, colaadda, “qabow” dagaalka, “kulul” dagaalka, yaraynta, difitsit, faro badan, iwm. TK. qof caadi ah, Isagu waa madaxa, isku day inaad ka fogaato, kuwaas oo kulan la yaab leh – madaxda ayaa isku dayaya inuu ku meeleeyo “dadka naafada ah” iyo “kooban” fekerka. Yaa masterfully xitaa ka qayb kulan oo caalami ah, kuu ogolaanaya inaad si uu uga dhaadhiciyo goobjoogayaasha muhiimada iyo faa'iidada waxa dhacaya, xataa, haddii dagaal aduunka. u dabbaaldegaan “dadka naafada ah” on awood “ulaha” Waxa ay u ogolaataa for qaaradood waraabka fiican “waxyaabaha izvraschenskih of biodegradation”.
Warbaahinta abuuri karaan nebiyadii kakanaanta kasta, ku dhawaad ​​maalin kasta. Nadressirovannye “hamsters” adeegyada ammaanka iyo diimaha kala duwan ee ay ku ciyaari karaan ku dhowaad kasta oo xisbiga la xidhiidha gudbinta non-xiriir oo fikirka ah ee meel fog ka, Waswaasiyo, saadaasha ah, Waxaan ku Dhagarteen hay'adaha kale ee dawladda, xatooyo fikirrada iyo fikradaha dadka kale faa'iido u ah “gobolka” (maafiyada, gacanta dowladda). tusaale ahaan, shaqeeyo, oo awood u leh soo xiriir la ilbaxnimooyinka kale ama jinsiyadaha ka meerayaasha kale, Waxa si fudud laga yaabaa in lagu siri by ravings of unit a military khaas ah, kaas oo ku hawlan arrimaha. ie. marka dadku bilaabeen inay soo baxaan xigmad iyo tegey xaday – xiriir masaasad la diyaarin karaa, halkaas oo ay ku yidhaahdaan, in “aad leedahay si kale sugi 100 sano ka hor inta aan mar kale la kulmaan oo ay sii wadaan in ay addoomo ahaan”. xiriirada noocan oo kale ah waxaa loo abaabuli karaa oo aad u badan, waayo mass, waxay loo baahan yahay in, dambiilayaasha dhiman kartaa geeri dabiici ah oo aan wax dhibaato ah iyo ammaanta. Waxa ugu yaab leh – ay u shaqayso.
Baxsiga Information ilaaliya cretinism waalan. Waxa inta badan ka sahlan yahay in uu magacaabo madaxa nerd ku deranged oo ku nool kharash kun oo noolaha unsold, ka badan in ay sameeyaan wax faa'iido leh. Parasitism waxaa faraxsan on Geeri meeraha.
Marka ay timaado waqtiga isbedelka xoogga, iyo uu jiro qof si ay u qaataan “carshigii” – waxaa jira isku day ah in la baabi'iyo musharixiinta, nooc cusub oo dowladda ah ayaa bilaabay in ay isku mid kor loogu qaado “nebiyadii hore”.
The noolaha ugu waxtarka iyo rajo, taas oo kor u Space ujeedooyin iyaga u gaar ah, meel ka mid ah bixinta tamarta iyo macluumaadka, xaday in ay ku quudiyaan kartaa Samo oo dhan, Ama gobolka ee caalamka. ee gaaban, xatooyo degree go'aamiyo qiyaasta halligaadda soo socda. Mararka ay dhacdo, in Gobol kasta, taasoo keentay siyaasadaha ku filan oo macquul ah wax yar, si lama filaan ah uu bilaabo sabab u dhaqmaan la'aan ma aha caadiga ah iyo horumarinta ee ay ka wakiil gaar ah meel kasta oo hore u nebcaaday – waxaa loola jeedaa, ay xadeen gabal cusub ee macluumaadka iyo isku dayayaan in ay wax ka xadaan qaddar in, kii waxaa loogu tala galay. Dabcan tani waxaa la socday oo kaliya si ay u badbaadiyaan iyaga u gaar ah “hargahood”: “waayo, haatan, bannaan, ah, aad Maxay yihiin si ay u nadiifiyaan dhalaalaya, dhigi (la 99% khasaare) “madaxa slop” iyo tan aad leedahay si ay u sii noolaadaan, haddii kale ay ku hardiyi doonaa badhanka – Khan iyo hareeraha! waxaan fahamsan yahay?” Oo, suurto gal, Dhow yahay jirka iyaga oo maraya oo nool oo dhan. Waxaa laga yaabaa in ay sabab aad u, ama la mid ah sida aad ku qor, ku nool dalka oo dhan ama magaalada. Oo xataa aan xatooyo jidhka ee horumarka ah ee tamarta loo baahan yahay iyo ilaha laga heli karaa dalka oo dhan ama Caalamka doonaa. laakiin, statistics show, adag u adkaysato si ay u xadaan. In this dadka oo xiiso leh in lagu ixtiraamo. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay Cosmos oo dhan ku nool. Iyo hay'adaha dagaal badan oo lala beegsaday xaday aayahooda iyo gaar ahaan sintaan Haweejkiinna dhexdooda maamulayaasha qof kale oo madaxda xukumay eryidda ka Universal ee, Life of space iyo Planet bannaan, ie. caadiga Exile. “Xatooyo qaddar qof kale? Ha aad rabin in ay ku noolaadaan oo ay aayahooda? Sidaas ma aad rabto in aad ku nooshahay oo aad wax ay halkan ku samaynayaan leeyihiin.”
Bilowga hawlaha firfircoon noolaha dulinka yaabay kartida “Nadiifi oo dhalaalaya” oo ma waxaan gelayaa ceeb sababtoo ah, in sinaba aan gaari karo heer isku mid ah. Waa maxay iyaga riixay in tallaabooyinka soo socda:
1. Waxay bilaabaan inay dilaan iyo hilib ku cuntaan in (sida kanibalы) in rajada, in awoodda iyo xoogga loo wareejin doonaa ah, kuwaas oo hilibka cuna.
2. Ka dib niyad sabab u ah fikradaha qaldan kanibalskih bilaabmaa xadeen technology iyo waxyaabaha dhaqanka, rajada ah in awood u leeyahay inuu isu muujiyo in taabashada walxaha kuwan.
3. Qoomamo kale. Xatooyada iyo kufsi nooca daciif ah wakiilada u fiican. In rajada ah in ay ku dhali doontaa ee kids smart isla. Rabovladelcheskyy Story.
4. burburinta dadka iyo qabsashada dhulka.
5. Xatooyada iyo burburinta hantida dhaqanka iyo technology iyo soo saarista xiga iyada oo n-boqol oo sano ka wakiil ah shirkadaha iyaga u gaar ah. Waayo, aawadiis of Isbadal “Nadiifi oo dhalaalaya” wax “brown”.
Sharciga ku waari muwaadin, qabtay oo ka hooseeya “vodopadami” iman kara wadnay, Waxaa xaq u leedahay oo kaliya in ay burburinta ama xubnaha jidhka ee u gaarka ah iyaga u gaar ah qoyska sida magdhow, TK. on “sharciga” on sharciga kale ma aha. Markaas yimaado diinta ee “Nadiifi oo dhalaalaya” wax “brown”. by sabab of “transformations” element kasta oo waxtar leh uu joogsanayo si uu u jiro, oo meelahooda laga qaadayaa by farcankii Satanism iyo Faracoodii. Thanks to waxa dhacaya marka la eego burburinta degdegsiimada dunida ku xeeran.
gobolka daacad Qaar ka mid ah, in la burburiyo cadowgooda in wajiga of dalalka kale, maal qayb ka mid ah miisaaniyadda in ay dadka “fasalada hoose” iyo “ka dhacay” qeybaha kala duwan ee bulshada (dhac, musuqmaasuq, dhillaysi, ka ganacsiga daroogada iyo dhacdo ka badan lagu daabacay). oo korkoodana, ka dib markii labo ka mid ah labaatankii sano ee dibadda ama goobaha loo dalxiis tago laga maqli karo, arko iyo dareemaan si taxadar la'aan, janjeeraa, dhaqanka aan, ma la xiriirta aadanaha quruumaha, taas ayaa la kulma si ay u baabba'aan. Tani waxay dhacdaa sabab ah mid aad u fudud,: oo dhan sannadahan, ilaa xaaladda ma cada, dadka liita booqday goobaha loo dalxiis tago iyo dalalka kale, halka ugu dhaqmayaan sida dabeecadda iyaga ka mid ah, in koorsada, sameeyay xiriir gaar ah dhammaan dadka la xiriira. Sababo la xiriira qofka dhaqanka iyo waxbarashada this ee dalalka iyo meelaha loo dalxiis tago wax ka qaban, TK. qaata kooxda noqdaan isku mid “fasalka nyzshym”, sida ay, oo iyada booqday dadka ilbaxnimada. By Samo falku waxa ku noqonayaan preukrashen asalka caalamiga ah. Oo ahaantii ma aha gaar ahaan loo baahan yahay, iyo, TK. faa'iido gaar ah ma ma noqon doono. sidaa darteed ka dib?
Sayidka Bulshda dhaqaalaha dalka cadowga burburin kara ma aha oo kaliya, laakiin dalalka caalamka, Haddii xisaabinta in la xadido nafteena in mid ka mid ah caalamka oo kaliya.
Ka fiirsaneysa reincarnation necrotic waa wax aan macquul aheyn in ay gudbaan by hiddo. taas oo “dhawraya” Karma si xoog maasuqay. aasaasay experimentally, in ay dhacdo dhimashada mid ka mid ah qaraabada gafafkanaga iyo duleella oo dhan (ie. Karma) “uu hoos u dhaco” on kuwii madaxda u ahaa xubno ka tirsan qoyska, oo ay taasi dhacdo in Joogaba, qaarkood. The ugu halkan xiiso leh in la arko qiimaha. “Ilaah imtixaanada ma awoodi kartaa in aadan bixin.” In this “Warshad qaybinta Carmen” dhigaa u soo baxo uu u qabata hawlaha rabaani ah, iyo, kan agoon ah, rajo iyo adag ay dhaco dhib macquul ah (ie. ama dhamaan ama ugu adag), iyo kuwo kale oo aad u, “nachislyayut” sida ay awoodaan, kaliya NFD waxba qaadan. maxaa yeelay,: “si fiican u, Sidee kale sameeyo?” Sayidka laga eego ee u shaqeeyo ah waxay noqon kartaa hab caadiga ah xakamaynayaan. Jidaynayey dhexdooda mass cirro jajabiyey “mararka qaarkood qarxaan rays zetovskih upstarts”.
Sidoo kale waa in la tixgeliyo, miyir, nugul xumaanshaha, Nolosha soo socda fursad u yeelan doontaa in ay dhex maraan qaladaad oo dhan aan mar kale, diidanyihiin foom adkeeyay dheeraad ah. Haddii aad dalka, ma jiro mid ka mid ah in ay ka shaqeeyaan khaladaadka shakhsiyaad kale (xitaa ma kaaga qisoonay) – waxay loo gudbin karaa si aad u, haddii aad leedahay awood ku filan. Total waxaan leenahay X = nX + cX + + S1X S2X…. (halkaas oo n- Waa u dhexeeya 2 in xad loo baahneyn. oo dhan dhiqlaha u guurayso a kara muddo dheer oo u ah nolosha ee soo socda ee, kii iyaga uumay; la, S1, C2 – Waa u dhexeeya 0 si ay u 0,99, TK. qaybinta qalad oo dhan aawadiis suurto gal ka yar ididiilo, X – kiiskan waa tiro joogto ah, la mid ah sida 1, 5 ama 25) Sababta oo ah, taas oo ay jirto su'aal cad: marka 25 Waxaa weli 188 ama xad la'aan? Waxa ay u muuqataa, in mid ka mid ah dadka ku nool xisaabta dugsiga marka laga reebo ma aan baray. Thanks to this zamalchichaniyam xisaabeed cajiib kasta oo taliye u fiican samayn karo caadiga ah “mouse yar cirro wax yar”. Maxay kula tahay: si wax looga qabto xaaladda caadiga ah ee Hijrooday ee Machadyada ee Karma oo dhan maamula iyo fulinta awoodaha noqon doonaa ku filan?
Samatabbixiyeyaasha ™ ®.
Qaabka guud ee rabitaanka caalamka in ay qabsadaan iyo terorizma TV, waxaa jira rabitaan ah in ay dhacaan ama dhammaan addoonsan. Ujeeddooyinkan, badbaadinta ururka, waa hab gaar ah si ay u faaruqiso ee meelo ka mid ah dadka kale. Haddii ururada badbaadinta ee caalamiga ah waxaa iska leh dalkaaga ama group of dalalka aad – ay shaqo caalamiga ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u dumiyaan cadaawayaashiinna, xataa haddii cadowga aan sameeyey cadaawayaashiinna, iyo dadka, taas oo leh ugu weyn “kheyraadka iyo maskaxda bakhaar”, a fortiori, waxa ay, tahay, hore u wanaagsanaan doonaan, iyo fikradda ah “badbaadiye” waayo, waxaa iyaga quduus wuu noqon doonaa.
Sida caadiga ah, kuwaas oo hay'adaha caalamiga ah loo gudbiyaa “Interpol” ama “Interpol” ie. askari oo bilays ah oo caalami ah. sarkaal ka tirsan bilayska – xafiiska quduuska this at “meerayaasha dhimashada”. Maadaama uu, Dhammaan ururrada sida ma qabtaan hawlo iyaga u gaar ah si fiican – waxay u baahan tahay in ay dhex maraan ee Hijrooday ee caadiga ah iyo hufnaan si fiican roob isticmaalka metioritny, sidoo kale waa la aqbali karo xitaa buureedyada oo daadkii. Waa in la hoos geliyey in ay ka saarida la mid ah “aan istaahilin” , ay sabab u tahay taas oo ay jirto waa wax macquul ah ee jiritaanka hay'adaha oo dhan bufatornyh.
damaanad gobolka Strong of guusha, nolosha deggan oo ku faraxsan, laakiin kaliya Space dhammaadka lahayn Waxay ku siin karaan xasilooni dhab ah oo waxaad ka samaysaa mid kasta oo run ahaantii ku faraxsan.
· 0 • ● ⊡ ▲ Yello – eryi Dadka degani ▲ ⊡ ● • 0 ·
July 2012 – September 2013 sano ee kaalendarka Gregorian.
No trackbacks weli.
KGB iyo weheshiga